သုံးရောနှောဇာတ်စင်ဖို့ Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများဖြည့်စွက် Dolby Atmos - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများဖြည့်စွက် Dolby Atmos သုံးခုရောသမဇာတ်စင်ရန်
Culver စီးတီး, Calif.- ယင်း၏သံကိုအရင်းအမြစ်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုးချဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်, Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင်သုံးရောနှောအဆင့်သို့အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ် Sony က စွဲငြိဖွယ်ရာ Dolby Atmos format နဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အသံကိုရောစပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ရုပ်ပုံများတွေအများကြီး။ သူတို့ကိုတို့တွင် 344-ထိုင်ခုံ cari Grant ကဇာတ်ရုံ, စတူဒီယို၏အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Sony က ရုပ်ပုံများယခု Dolby Atmos နှင့်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကိုးဦးရှိသည်ဖို့အစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့သောခုနစ်ပါးသောရောနှောအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာရောနှောဘို့စီစဉ်ထားပထမစီမံကိန်း Sony က ရုပ်ပုံများ '' Spider-Man ™: ဝေးမူလစာမျက်နှာထံမှဇူလိုင်လ 5, 2019 အပေါ်မြောက်အမေရိကရုပ်ရှင်ရုံရန်၎င်း၏လမ်းက။
Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအကြားနှစ်ဦးစလုံး, Dolby Atmos အတွက်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားကြုံတွေ့လျက်ရှိသည် Sony က ရုပ်ပုံများဘဏ်ဍာနှင့်ပြင်ပရှိသူတို့အား Sony က ရုပ်ပုံများမိသားစု။ "ငါတို့ရှိသမျှသည်ထုတ်လုပ်သူများ, ရှိသမျှပေးပို့လိုအပ်ချက်များကိုအပေါင်းတို့နှင့်ပလက်ဖောင်းလိုက်လျောညီထွေချင်," တွမ်ဆက်မက်ကာသီ EVP, Post ကိုထုတ်လုပ်မှု်ဆောင်မှုများဆိုသည်ကား, Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က။ "ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်မိုဘိုင်းဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်း, ကြီးမားတဲ့ပုံစံ, ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြား, အိမ်ကဇာတ်ရုံ, ပါဝင်သည်။ "
အဆိုပါအဆင့်မြှင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Sony က အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဖျော်ဖြေရေးသံကိုန်ဆောင်မှုများ၏ Premiere အရင်းအမြစ်ဖြစ်ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ '' ကတိကဝတ်။ "Atmos ဘို့တပ်ဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးဇာတ်စင်, cari Grant က, ထားရှိခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံသည်အခွက်တဆယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ချင်နဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးမှုအနုပညာရှင်မှပေးထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားသူကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ကြီးမားတဲ့သရေကျဖြစ်ပါတယ်" ဟု Kimberly Jimenez, အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများကပြောသည် Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က။
Sony က ရုပ်ပုံများ Studios က '' cari Grant ကဇာတ်ရုံ
အဆိုပါအလုပျကနေဖန်တီးမှုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအတူလိန်း Burch, စတူဒီယိုရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအသံအင်ဂျင်နီယာ၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျပွီးစီးခဲ့ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်®-အနိုင်ရ Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှောကီဗင် O'Connell နှင့်အသံ Editor ကို Will ဖိုင်များကြီးကြပ်။ အဆိုပါ cari Grant ကဇာတ်ရုံမှ upgrades Dolby Atmos အတွက်ဖော်စပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့့ JBL အသံချဲ့စက်၏ 46 လိုင်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါပြဇာတ်ရုံကို dual 48-fader features လွန်စွာလိုလားသော S6 consoles စလေး လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များ HDX-3 စက်တစ် 192-ရုပ်သံလိုင်း HDX-3 Pro ကို Tools များအသံဖမ်း, ပြန်ဖွင့်ဘို့သီးခြား Pro ကို Tools များကို Workstation တစ် Harrison အသံက X-Range တစ်ခု 64-ရုပ်သံလိုင်းက X-Range အသံအင်ဂျင်နှင့် 512 × 512 X- နှင့်အတူ matrix ကိုစောင့်ကြည့် range MADI router ကိုတစ်ဦး 4K Sony က ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံပရိုဂျက်တာများနှင့်သစ်တစ်ခု Stewart ကရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်။
အဆိုပါစတူဒီယို '' ဂျင်မီ Stewart ကပြဇာတ်ရုံကိုလည်း Dolby Atmos ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်အိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေးစပီကာကို formats နှစ်ဦးစလုံးထောကျပံ့ဖို့အဆင့်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ dual-24-fader features လွန်စွာလိုလားသော S6 consoles စသုံး လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များ HDX-3 စက်တစ် 192-ရုပ်သံလိုင်း HDX-3 Pro ကို Tools များအသံဖမ်းတစ် Harrison အသံက X-Range တစ်ခု 64-ရုပ်သံလိုင်းက X-Range အသံအင်ဂျင်နှင့်အတူ matrix နှင့် 512 × 512 X-Range MADI router ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Sony က 4K ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံပရိုဂျက်တာများနှင့်တစ်ဦးထုံးစံ့ JBL / BSS ပီစနစ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ Grant ကနှင့် Stewart ကရုပ်ရှင်ရုံကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီ IMAX 5,6နှင့် 12 ရုပ်သံလိုင်းကို formats ။
Dolby Atmos အဆင့်မြှင့်အဆင့် 10 ပေါ်မှာတည်ရှိစတူဒီယိုရဲ့ 3-ထိုင်ခုံပြဇာတ်ရုံ6ပေါ်တွင်တိုးတက်မှု၌ရှိကြ၏။ အလုပ်ပြီးပြည့်စုံသောအခါ, တက 48-fader မည်ဖြစ်သည် လွန်စွာလိုလားသော S6 console ကိုလေး လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များ HD စက်တစ် 512 × 512 Harrison က X-Range MADI Router ကတစ် Sony က 4K ပရိုဂျက်တာများနှင့်တစ်ဦး့ JBL စပီကာခင်းကျင်း။
ထို့အပြင်, Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများသစ်နှစ်မျိုးကိုပြဇာတ်ရုံ-စတိုင်သံကိုဒီဇိုင်းစတူဒီယိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအဓိကအားအသုံးပြုသောလိမ့်မည် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်မကြာသေးမီကစတူဒီယိုရဲ့အသံကအသင်းကိုလာရောက်ပူးပေါင်းသူကိုအသံအယ်ဒီတာများကီလီဗန်နှင့်အင်ဒရူး DeCristofaro ကြီးကြပ်®-အမည်စာရင်းတင်သွင်း။
အေျကာင္းအရာ Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က
Sony Pictures Entertainment က (SPE) ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ် Sony က တိုကျိုအခြေပြု၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည့်ဖျော်ဖြေမှု Inc ကို, Sony က ကော်ပိုရေးရှင်း။ SPE ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှု, ဝယ်ယူနှင့်ဖြန့်ဖြူးပတ်ဝိုင်း; ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု, ဝယ်ယူနှင့်ဖြန့်ဖြူး; ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များ, ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး; စတူဒီယိုအဆောက်အဦ၏စစ်ဆင်ရေး; အသစ်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ SPE ရဲ့ Motion Picture Group မှရုပ်ရှင်ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများ, မျက်နှာပြင်ကျောက်မျက်ရတနာ, TriStar ရုပ်ပုံများတံဆိပ်များလည်းပါဝင်သည်, Sony က ရုပ်ပုံများ Animation ရဲ့နှင့် Sony က ရုပ်ပုံများဂန္တဝင်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, ခရီးစဉ် www.sonypictures.com/corp/divisions.html.
အေျကာင္းအရာ ပင့်ကူလူသား™: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ.
ပတေရုသက Parker Spider-Man ™အတွက်ပြန်လာ: ဝေးမူလစာမျက်နှာ, အ Spider-Man ™၏နောကျအခနျးမှ: Homecoming စီးရီး! ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေရပ်ကွက်အတွင်းစူပါသူရဲကောင်းတစ်ဦးဥရောပအားလပ်ရက်အပေါ်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကို Ned, MJ, နှင့်ဂိုဏ်း၏ကျန် join ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူကမသိစိတ်၌နစ်ခ် Fury တိုက်ကြီးအနှံ့ဖျက်ဆီးအတွက်အများအပြားကို elemental သတ္တဝါတိုက်ခိုက်မှု၏နက်နဲသောအရာကိုဖော်ထုတ်ကူညီရန်သဘောတူကြသောအခါသို့သော်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့နောက်ကွယ်တွင်စူပါသူရဲကောင်းထားခဲ့ဖို့ပေတရု၏အစီအစဉ်ကိုအလျင်အမြန်ဖျက်သိမ်းကြသည်!
Jon Watts တို့ကညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ခရစ် McKenna & Erik Sommers နေဖြင့်ဇာတ်ညွှန်း။ Stan Lee နဲ့စတိဗ် Ditko အားဖြင့် Marvel ရုပ်ပြစာအုပ်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ကီဗင် Feige နဲ့ Amy Pascal အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ လူးဝစ်က D'Esposito, ဗစ်တိုးရီးယား Alonso, သောမတ်စ်အမ် Hammel အဲရစ် Hauserman ကာရိုး, ရာခေလသည် O'Connor, Stan Lee က, Avi အာရဒ်နှင့် Matt Tolmach အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Marisa Tomei နှင့် Jake Gyllenhaal နှင့်အတူတွမ်ဟော်လန်, Samuel L. Jackson လည်း, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB- Smoove, ယာကုပ် Batalon မာတင် Starr, သရုပ်ဆောင်။ony.com
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Dolby Atmos ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-04-16
ယခင်: universal ထုတ်လုပ်မှု Music နဲ့ Killer သဲထုတ်လုပ်မှုဂီတ Catalog "Abbey လမ်းမကြီးမာစတာ" စတင်ရန်မှ Abbey လမ်းမကြီးစတူဒီယိုနှင့်အတူအဖော်သီချင်းများ
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းညှိနှိုင်းရေးမှူး / ပြန်ကြားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအင်ဂျင်နီယာချုပ်